Dirty Step Father Brainwashes His Step Daughters (2020) mmsub
by CHANNEL+ October 25, 2020
(21+) Dirty Step Father Brainwashes His Step Daughters (2020) နျမာစာတနျးထိုး
ဒီတခါတော့ dsဖနျကွီးတှကေို မိသားစုဒရာမာဇာတျကောငျးလေး တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ.ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ကြျောကွီးမှာ မယားပါသမီးခြောလေး နှဈယောကျပါလာသတဲ့။ မိနျးမဖွဈသူကလဲ နမေကောငျးလို့ ဆေးရုံတကျနရေတော့ ကြျောကွီးခဗြာ ညစာရော နစေ့ာရော ငတျတာပေါ့.
ဒါနဲ့ပဲ အကွံထုတျခဲ့တယျ...အမေ မရရငျ သမီးနှဈယောကျပဲ ကနျြမယျဆိုပွီး ဉာဏျကောငျးအောငျ ကြားမာနျဟုနျ လေးဗူးလောကျသောကျပွီး အကှကျတှေ ၁၁ကှကျလောကျ ရှလေို့ကျတာ သမီးနှဈယောကျကို ရှမျးရှမျးတောကျပိုငျနိုငျသှားတာပဲ.
အမှောငျလောကသခငျကြျောကွီး ဘယျလိုတှေ အကှကျရှတေ့ယျ ဘယျလိုတယျသာယာတယျဆိုတာ ရိုကျပွထားတဲ့ ဒရာမာဇာတျလမျးလေးမို့ ကွညျ့ဖွဈအောငျကွညျ့ဖို့ ညှနျပါရစေ...
အသကျ (၁၈) နှဈအောကျ မကွညျ့ရပါ
(21+) Dirty Step Father Brainwashes His Step Daughters (2020) န်မာစာတန်းထိုး
ဒီတခါတော့ dsဖန်ကြီးတွေကို မိသားစုဒရာမာဇာတ်ကောင်းလေး တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်.ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ကျော်ကြီးမှာ မယားပါသမီးချောလေး နှစ်ယောက်ပါလာသတဲ့။ မိန်းမဖြစ်သူကလဲ နေမကောင်းလို့ ဆေးရုံတက်နေရတော့ ကျော်ကြီးခဗျာ ညစာရော နေ့စာရော ငတ်တာပေါ့.
ဒါနဲ့ပဲ အကြံထုတ်ခဲ့တယ်...အမေ မရရင် သမီးနှစ်ယောက်ပဲ ကျန်မယ်ဆိုပြီး ဉာဏ်ကောင်းအောင် ကျားမာန်ဟုန် လေးဗူးလောက်သောက်ပြီး အကွက်တွေ ၁၁ကွက်လောက် ရွှေ့လိုက်တာ သမီးနှစ်ယောက်ကို ရှမ်းရှမ်းတောက်ပိုင်နိုင်သွားတာပဲ.
အမှောင်လောကသခင်ကျော်ကြီး ဘယ်လိုတွေ အကွက်ရွှေ့တယ် ဘယ်လိုတယ်သာယာတယ်ဆိုတာ ရိုက်ပြထားတဲ့ ဒရာမာဇာတ်လမ်းလေးမို့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ဖို့ ညွန်ပါရစေ...
အသက် (၁၈) နှစ်အောက် မကြည့်ရပါ
Link - https://mkvlinks.xyz/UKwl